ဥရောပ (၆) နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ရိုက်ကူးမယ့် "RIDE ON EUROPE"
Home » Celebrity News » Event » ဥရောပ (၆) နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ရိုက်ကူးမယ့် "RIDE ON EUROPE"
#Celebrity News #Event
သရုပ်ဆောင် ကျော်ကျော်ဗို ဦးဆောင် ရိုက်ကူး တင်ဆက်မယ့် "Ride On Europe" ခရီးစဉ် မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Taw Win Garden Hotel မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်မှာ အရှေ့ ဥရောပ ရဲ့ နိ်ုင်ငံ (၆) နိုင်ငံသို့ အလည်အပတ် သွားရောက်ပြီး၊ နိုင်ငံတစ်ခုခြင်း ဆီမှာရှိတဲ့ ဒေသထွက် အစားအစာ၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေ အပြင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေကို တင်ပြသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ခရီးစဉ် တစ်လျှောက်လုံးကို ဒါရိုက်တာ သည်ခေတ်နေ က ရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပြီး၊ သရုပ်ဆောင် ကျော်ကျော်ဗို နှင့်အတူ သရုပ်ဆောင် မာရီိကိုးလ် က ဒီခရီးစဉ်မှာ လိုက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ "Ride On Europe" ခရီးစဉ်ကို လာမယ့် ဇွန်လ (၂၄) ရက်နေ့မှာ သွားရောက် ရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပြီး၊ MNTV ရုပ်သံလိုင်းကနေ ထုတ်လွှင့် ပြသသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
The press launch of "RIDE On EUROPE" travel tv program was held at the Taw Won Garden hotel in Yangon on June 19, 2017. Actor Kyaw Kyaw Bo will lead this travel program, directed by director Thae Khit Nay. #RideOnEurope #KyawKyawBo